Wada hadalo u dhaxeeya Shariif iyo Siilaanyo oo ka socda Dubai . Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Wada hadalo u dhaxeeya Shariif iyo Siilaanyo oo ka socda Dubai . Madaxweynaha dowladda KMG Sheekh Shariif iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa waxa ay wada hadalo uga soconayaan magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Sida Warlalis ay u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay waxaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ku kulmay in Madaxweynayaasha dowladda KMG iyo Maamulka Somaliland kuwaasi oo ka wada hadlaya gooni isku taaga Somaliland.
Labada Madaxweyne ayaa waxaa la sheegay in ay isla soo hadal qaadeen heshiiskii Gudiyadii ka kala socday labada dhinac ee dowladda iyo Somaliland ay ku gaareen magaalada London inkastoo aan la sheegin wax goaan ah oo ilaa hada ay meel isla dhigeen Shariif iyo Siilaanyo.
Kulanka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Axmed Maxed Maxud Siilaanyo ayaa caawa casho sharaf ku wada qaadan doona magaalada Dubai, iyadoo wada hadaladooda ay bari soo gabagaboobayaan.